I-2A Hydraulic Systems - iMessina
Izitshalo nokulungiswa - Ikhaya neFenisha
Ukuphepha kwakho ekhaya kuphathiswe ochwepheshe bezitshalo
2A Isebenza ngu-Antonio Albarino, e Viale Regina Elena 103 a Messina, yinkampani ekhethekile Ama-hydraulics, umoya opholisa, ukufudumeza, amasistimu wegesi. Ngaphezu kwalokho, inkampani ifanelwe i- Ukulungiswa kwangaphakathi sibonga umthetho wokuthola iziqu 46/90.
2A Impianti - Izinsiza eziningi, ubuchwepheshe obuningi
2A Antonio Albarino Izimila, e-Viale Regina Elena 103 eMessina, ubelokhu enza ukuba kutholakale kumakhasimende ayo athembekile lonke ulwazi nobungcweti obutholwe ngaphezu kweminyaka yokuba khona komkhakha womoya kanye nowokushisa nowezinhlelo. Le nkampani edumile ibisizama iminyaka ukunika ikhasimende inkonzo ephelele ngenxa yobungcweti nokungathí sina obekulokhu kuhlukanisa njalo.
Izitshalo ezi-2A Antonio Albarino eMessina inomsebenzi oqeqeshiwe noqeqeshelwe umsebenzi wobuchwepheshe obalulekile, obaluleke kakhulu ekwenzeni umsebenzi ngendlela enjengomsebenzi futhi ngokushesha. Ngaphezu kwalokho, ukuvezwa kwangempela kwenkampani ehlonishwayo kumkhakha wePlumbing: ngenxa yolwazi olukhulu nobuchwepheshe, kanye nokusetshenziswa kwemikhiqizo esezingeni eliphakeme, i-2A Impianti iyakwazi ukuqinisekisa ukulungiswa njalo, ukuvuselela izinhlelo ezingasebenzi futhi ukuxazulula izimo eziphuthumayo ngokungenelela ngokushesha nangemiphumela ehlala njalo.
I-2A Impianti - Ukuvuselelwa Kwangaphakathi
2A Antonio Albarino Izimila, e-Viale Regina Elena 103 eMessina, kuyiphuzu langempela lereferensi eMessina nakwisifundazwe sabo kubo bonke abafisa ukuthola insiza engu-360 ° ngesikhathi esifushane. Le nkampani ehlonishwayo sekuyiminyaka ifuna ubuchwepheshe obukade busezingeni eliphezulu nobunqenqemeni namasu nemikhiqizo yemikhiqizo emihle kakhulu yokwakha Ukushisa, izinhlelo zokungenisa umoya kanye nokungenelela kwe Ama-Hydraulics.
Ngaphezu kwalokho, sibonga iziqu ze-Law 46/90, i-2A Impianti Antonio Albarino kanye neTechnical Staff yakhe banganikela ngamanani aphezulu weKhono nobungcweti ekuvuseleleni okungaphakathi kwabomuntu ngamunye nezinkampani kanye namahhovisi. Ngemuva kokutadisha ngokucophelela kwezimo ezandulele kanye nokubonisana nomuntu, i-2A Impianti ka-Antonio Albarino izoqhubeka nokuthola isisombululo esifanelana kangcono nezidingo zakho kanye nezidingo zakho futhi ungenelele ngesikhathi esifanele nangokubaluleka okufanele kwaso.
I-2A Impianti - Ukuhlangenwe nakho nokusebenza
2A Antonio Albarino Izimila, eMessina, iminyaka ekhona emkhakheni wezimo zomoya kanye nokushisa ngezinhlelo zegesi, ngenxa yokuvuselelwa okuqhubekayo nokuqeqeshwa kwabasebenzi bayo bobuchwepheshe abaqeqeshiwe, iyakwazi ukuphendula izidingo zakho nezidingo ngobungcweti nekhono lelo hlukanisa njalo.
Ukuhlangenwe nakho okuhle kwenkampani kuhlanganiswe nokungathí sina lapho kwenziwa khona ukungenelela ezinhlelweni zegesi, kanye nakwezimo zomoya, ukufudumeza nokubopha amapayipi kanye nokuvuselelwa kwezindlu zangasese phakathi kwabantu abazimele kanye nezinkampani namahhovisi, kwenza inkampani ehlonishwayo okuhle ongaphendukela kukho uma ufuna isiQinisekiso Senkonzo Esiphelele Futhi Esinokwethenjelwa.
Ikheli: Nge-Conte di Torino, iminyaka engama-69
Umakhala ekhukhwini: 328 6410691
Iwebhusayithi: www., ewebweb.com
Inombolo ye-VAT: 03042430839